Su'aalaha La Weydiiyo - Jiangsu Three Sheep Garden Products Co., Ltd.
Fadlan soo dir faahfaahintaada faahfaahsan waxaanan ku siin doonaa qiimaha ugu fiican ee warshad.
Haa. Fadlan na sii faahfaahintaada. Haddii faahfaahinta alaabtu ay tahay waxa aan ku sameyneyno mashiinka, MOQ wuxuu noqon karaa tiro yar. Haddii alaabooyinka la habeeyay, MOQ wuxuu noqon doonaa 1000kgs.
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa qiyaastii 7 maalmood. Wax soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 25-30 maalmood hal weel kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Fadlan soo dir baaritaan oo ka wada hadal faahfaahinta.
1. 30% dhigaalka ka hor,70% dheelitir ka dhan ah nuqulka B / L.
2. LC araga
Waxaan higsaneynaa inaan noqono kuwa ugu nasiibka badan macmiil walba. Waxaan aaminsanahay inaan gaari doonno natiijada ugu fiican haddii aan daacad u noqonno oo aan daacad u noqon dhinacyada oo dhan.
Fadlan ka fiiri buugyarahayaga. Waxaan nafteena ka sameysanaa mashiinka shabaqa oo aan dhoofino mashiinkan. Dhamaan shabaqa waxaa sameeyay mashiinkeena. Marka waxaan dammaanad qaadi karnaa 100% tayada,